Iskena seKhadi le-AtEvent: Ukuzenzekelayo kunye nokuPhucula ukuThathwa kweNkokeli kwiMicimbi | Martech Zone
Iskena seKhadi le-AtEvent: Ukuzenzekelayo kunye nokuPhucula ukuThathwa kweNkokeli kwimisitho
NgoLwesibini, Juni 2, 2015 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ndiya eChicago ngomso ukuya kudliwanondlebe netoni yeenkampani kwi INkomfa yoThengiso lweIntanethi kunye neMiboniso. Inkqubo yam esemgangathweni koku kukurekhoda udliwanondlebe ngalo lonke usuku, ukubhala amanqaku, ukuqokelela amakhadi oshishino, emva koko uye kwigumbi lam lasehotele xa wonke umntu ehlanganiselana iziselo.
Ngaphambi kokuba ndilibale nantoni na, ndingenisa bonke abafowunelwa kwi-LinkedIn kwaye emva koko ndibhalele amanqaku kum ngokulandela apho kufanelekileyo. Amathuba kukuba, ndiyakukhumbula isibini kwaye baya kuchaphazela iiveki ezisisiseko kamva bezibuza ukuba kwenzeke ntoni. Kukho konke ukunyaniseka, ndicinga ukuba ndilungile kodwa umntu uhlala ebonakala ephoswa. Ewe… kukho iapp!
Uhlelo lokusebenza lweselfowuni lweEvent's Scanner ngabantu abathengisayo ukuqokelela idatha yoqhakamshelwano kumsitho ngokufaka ngokuthe ngqo okanye ngokuskena ikhadi kunye nokusebenzisa i-OCR (Ukwamkelwa kweMpawu zoMlingiswa). Kwaye kunye nesicelo sabo esidityaniswe ngokupheleleyo-ungatyhala idatha ngokuthe ngqo kwi-CRM yakho (uLawulo lobuhlobo baThengi) kunye nomthombo womsitho oboniswe ngokucacileyo.
Uhlelo lokusebenza lweEvent Card Scanner luhlanganiswe ngokupheleleyo kunye nokusetyenziswa okuzinzileyo kunye nokuthenjwa okuzenzekelayo kunye neenkqubo zeCRM, evumela abathengisi bentsimi ukuba bathumele ngokuzenzekelayo idatha ethembekileyo ethembekileyo kwiinkqubo zabo abazikhethileyo kwaye baqalise inkqubo yokukhulisa ekhokelela kwangoko.
Ukuba udibanise ne-Event kunye ne- YokuThengisa iqonga, ungasigcina ngoko nangoko iphulo lokondla kunxibelelwano.
Umahluko ophambili kunye neqonga le -Event kukuba abafowunelwa nabo bakwanjalo Umdibaniso wenqanaba lombutho, Ukwenza ukuba abaqeqeshi bezentengiso babone ukunxibelelana ngaxeshanye okanye ngokwembali nombutho kuyo yonke imicimbi amaqela abo ebekhuthele kuyo.
Iqonga liza kunye ingxelo yexesha lokwenyani apho ujonga khona imveliso yeqela lakho lokuthengisa kwiofisi yakho yasekhaya okanye kumcimbi weposi.
tags: watya intoIskena sekhadi leshishinikhokelela khokelaIskena sekhadiinkomfa ekhokelela ekubanjweniCRMulawulo oludibene nabathengiukukhokelela kumnyhadalakhokelaukuzenzekela ngokuzenzekelayointlanganiso ekhokelela ekubanjweniocruphawu lokuqonda
Nceda uyeke ukuthelekisa ukuhlola kwe-NSA kunye nokuThengisa